Rooble wuxuu u baahan yahay inuu dhageysto mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble wuxuu u baahan yahay inuu dhageysto mucaaradka
Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha, ayaa cagta saaray wadadii ay muddada dheer ugu baaqayeen mucaaradka taas oo ah inuu qaato doorkiisa ku aaddan amniga guud ee dalka iyo maamulka doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisl Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, oo horraantii bishii May ee sanadkaan lagu wareejiyay amniga guud iyo hoggaanka doorashooyinka dalka oo ku dhawaad sanad gambasho siyaasadeed ah ku jiray, ayaa ugu danbeyn u muuqada inuu qaadanayo doorkiisa, wuxuuna xaafiiska Farmaajo ka hor taagan yahay tallaabooyinkii ay diidanaayeen Golaha Midowga Musharixiinta muddada dheer.
Rooble, wuxuu kulamo kala duwan la qaatay GMM, dhamaadkii sanadkii hore iyo billowga sanadkaan, kuwaas oo ay qeyb ka ahaayeen koox wakiil ka ah Fahad iyo Farmaajo, isla-markaana gooynayay go’aanadda dhanka Xukuumadda, taas oo mar kasta sabab u noqoneysay in ay burburaan wada-xaajoodyada.
Xilligaas, Midowga Musharixiinta, waxa ay ku doodayeen in Farmaajo aan lagu aamini kirin amniga dalka xilliga doorashooyinka, waxa ayna dalbanayeen in Ra’iisul Wasaaraha lagu wareejiyo amniga, taas oo ay ka hor yimaadeen kooxdii Fahad wakiilka ka ahayd.
Musharixiintu, waxa ay sheegayeen in Farmajo, uusan diyaar u ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho loo siman yahay oo ku dhacda si nabad ah, sidoo kale, waxa ay ku doodayeen in Farmaajo joojiyo go’aan ka gaarista arrimaha masiiriga ah, maadaama waqtigisi dhamaaday.
Ugu danbeyn, Ra’iisul Wasaare Rooble, Sadexdaas qodob ayuu hal-sano kadib magacabiddiisii ka hor taagan yahy Farmajo, (Amniga dalka, Doorashooyinka iyo Go’aannada masiiriga ah).
Farmaajo wuxuu ka hor yimid go’aanno la xariira amniga oo uu soo saaray Ra’iisul Wasaraha oo 1-dii May, lagu wareejiyay hoggaanka amniga, wuxuu si joogto ah u soo saarayaa go’aanno masiiri ah, halka sidoo kale, uu carqaladeyn ku wado doorashooyinka, kadib markii uu garowsaday in aysan jirin wax rajo ah uu ku soo laaban karo.
Rooble, wuxuu u baahan yahay inuu dhageysto talada mucaradka, oo la rumeysan yahay in ay afartii sano e la soo dhaafay soo bandhigayeen baaqyo wax ku ool ah, oo xal u ahaa xaaladaha cakiran ee manta.